Chọpụta otu esi eji osisi osisi chọọ ime ụlọ obibi | Bezzia
Susana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Ngwa ụlọ, .Chọ Mma
Osisi abughi ihe ndi di ndu nke na enyere anyi aka meputa oghere di nma ma di nma karie, ma ha bukwa akụkụ nke ochicho mma. Na ọtụtụ n'ime ụlọ dị n'ụlọ anyị nwere ike itinye osisi, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị enweghị ite ma ọ bụ ogige ebe anyị nwere ha. Ọ bụ nnukwu echiche ịtinye agba na osisi iji mee ka ime ụlọ a na-anabata ndị ọzọ.
na osisi na-achọ mma n'ime ime ụlọ ebe obibi enwere ike tinye ha n'ọtụtụ ebe. Ọ dị mkpa ịmata ebe ị ga-etinye ha ka ha wee ghara ichegbu onwe ha nakwa ka ha wee chọọ mma. Ọ bụrụ na ị ga-agbakwunye osisi n'ụlọ gị, egbula oge itinye ụfọdụ n'ime ime ụlọ gị ka oghere wee dị mma ma maa mma n'otu oge.
1 Otu esi elekọta osisi n'ime ime ụlọ
2 Tinye kaktus n'ime ime ụlọ ahụ
3 Mepụta akuku osisi
4 Osisi n'ime nkata wicker
5 Nghọta osisi dị n'ime ụlọ
Otu esi elekọta osisi n'ime ime ụlọ
La ezumike bụ ebe a na-ahụkarị ebe a na-eji ọtụtụ awa eme ihe. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ịmepụta ebe dị mma iji nwee ntụsara ahụ. Osisi na-enyere anyị aka imelite ikpo ọkụ na oghere ọ bụla. Iji jide ha, anyị ga-amarịrị ụdị osisi ọ bụ na nlekọta ọ chọrọ. Ebe ọ bụ na anyị ga-ebepụ ha, ego ole ka anyị ga-agba ha mmiri ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ọkụ ọkụ ma ọ bụ na ha achọghị. Ọ dịkwa mkpa na anyị na-ahọrọ naanị ahịhịa n'ime ụlọ, ma ọ bụghị ya, ha agaghị enwe ike ịlanarị n'ime ụlọ.
Tinye kaktus n'ime ime ụlọ ahụ
na cacti n'ime ime ụlọ ebe obibi bụ nnukwu echicheỌ bụ ezie na ọ buru ibu, a ga-akpachapụrụ anya ka ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ụmụaka ghara imerụ ahụ. Cacti ndị a zuru oke maka ụdị gburugburu niile. N'ime ime ụlọ ha na-emepụta oghere nwere ọtụtụ mmadụ. Ihe ịchọ mma boho, ụdị Nordic ma ọ bụ ụdị Californian zuru oke iji kwado ojiji nke cacti ndị a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha buru ibu. A kaktus anaghị achọ nlekọta dị ukwuu, ebe ọ bụ na ha nwere obere mmiri ma na-egbughị ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, yabụ ọ bụrụ na anyị dị ọhụrụ ilekọta osisi ọ bụ echiche kachasị mma.
Mepụta akuku osisi
Ọ bụrụ na ị dị ka ụdị ejiji na osisi, a oké echiche bụ ịgbakwunye otu nkuku na osisi. Jiri akwa akwa ma ọ bụ ọbụna igbe akwụkwọ iji tinye osisi na ọkwa dị iche iche. Nwere ike ịgbakwunye ha na mpaghara ebe ị nwere ezigbo ọkụ, na nso windo ahụ. Nkuku akuku zuru oke na ulo obula ma o na enye anyi ohere ilekọta ha ngwa ngwa. Can nwere ike iji arịa ụlọ ochie, n'ihi na ụzọ ahụ ọ ga-enwe amara karịa. Ọ bụrụ na itinye ọtụtụ osisi na akuku, ị nwere ike ịgwakọta ha, na-ahọrọ ụfọdụ dị iche, na -emepụta ihe mara mma.
Osisi n'ime nkata wicker
Nkata Wicker aghọwo ihe a ma ama n'ihi na ha dị ihe okike nke na-agbakwunye ulo di oku. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ oge, a na-eji ha ekpuchi ite ma nye ya mmetụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị ga-azụta nnukwu osisi, ị nwere ike iji ụdị nkata a maka ebe ime ụlọ. Havefọdụ nwere pompoms ma ọ bụ na-ese ha ka ha wee zuru oke maka iji ihe ọkụkụ chọọ ụlọ mma.
Nghọta osisi dị n'ime ụlọ
Wayzọ ọzọ itinye osisi na Ime ụlọ ezumike na osisi kwụgburu. Enwere iberibe crochet iji kpọgidere ha ma ha dị ezigbo mma, ọ bụ ezie na ha chọrọ ọrụ ọzọ n'ihi na ị ga-etinye hangers ma tinyekwa ite, nke enweghị ike ibu nnukwu. A na-eji ụdị ite ndị a ekewapụ oghere ma ọ bụ chọọ mgbidi na uko ụlọ mma. Ọ bụ nnukwu echiche ga - enyere anyị aka iji ahịhịa n'ọtụtụ ebe n'ime ime ụlọ wee mee ka ha chọọ mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Esi icho mma ulo obibi na osisi
Fọọ na cardigans ejiri kpuchie uwe ndị ochie